IINDLELA EZILI-15 EZIQINISEKISIWEYO ZOKWENZA IMALI NGOKUFUNDA NGOMATSHINI - IBHLOG
Iindlela ezili-15 eziqinisekisiweyo zokwenza imali ngokuFunda ngomatshini
Ngaba uyazi ukuba ungayenza njani imali ngokufunda ngomatshini? Nazi iindlela ezilungileyo zokufumana nge-AI.
Ubukrelekrele bobugcisa obufinyeziweyo njenge-AI itekhnoloji efumana ukuthandwa ngokukhawuleza. Kukho ithuba eliphezulu lokuba uyisebenzisile kwisiganeko esinye okanye ngaphezulu ngaphandle kokuyazi.
Ukufunda ngomatshini (ML), sesinye sezona zicelo zibalaseleyo nezisandula ukwenziwa ze-AI, kwaye kwesi siqwenga, siza kugxila ngakumbi kwindlela yokwenza yenza imali ngokufunda ngomatshini .
Ixesha elizayo likunye neML & AI.
Ke ngoko, kuya kufuneka sigxile kwindlela yokwenza imali ngayo kwaye sisebenzise ithuba lokuphila kwangoko kunye nokwamkelwa kwayo.
Ngoku, makhe sijonge indlela yokwenza imali ngobukrelekrele bokufakelwa.
Iindlela eziphambili zokwenza imali ngokuFunda ngomatshini
Nazi iindlela ezilungileyo zokufumana ngokufunda ngomatshini:
1. Iigigs zomhlaba ezineFlexJobs
I-FlexJobs yenye yezona ndawo zewebhu ezizimeleyo ngaphandle phaya ukuze zifumane imisebenzi ekumgangatho ophezulu kwiinkampani zokwenyani.
Nokuba usaqala okanye yingcali yokufunda ngomatshini, ungaqala ukunxibelelana nabathengi ukwenza imali ngolwazi lwakho ngokusebenza kwiiprojekthi ezizimeleyo.
Njengoko sonke sisazi (kwaye ndicacisile ukuphela kweli nqaku), kukho itoni yezicelo zokufunda ngomatshini kunye nobukrelekrele bokuzenzela.
Oko kubonisiwe ngeendlela ngeendlela kwiFlexJobs njengoko kukho iinkampani ezithembakeleyo phaya zifuna ukuqesha ukufunda ngomatshini kunye neenkqubo zobukrelekrele bokuzenzela ngoku.
Ukuba uthanda ukusebenza ukude, iFlexJobs yindawo ekuya kuba njengoko uya kuba nethuba elaneleyo lokumisa i-gig suku ngalunye.
2. Yiba yi-freelancer okanye udwelise inkampani yakho ukuqesha iqela kwi-Toptal
I-Toptal ifana neFlexJobs ngaphandle kokuba ifanelekile kuphela kubasebenzi abasebenza ngokukhululekileyo kunye neenkampani eziphezulu ezifuna ukuqesha abaqhubi beenkqubo zemitshini ezizimeleyo.
Oku kubonisa ngereyithi yeyure enikezelwa kwindawo kunye nomgangatho weenkqubo.
Ukuba ungumntu osebenza yedwa, ayinguye wonke umntu oya kufaneleka ukujoyina iqonga leToptal. Uyakufuna ukuya kwiseti engqongqo yovavanyo kunye nemibuzo ukuze uvunyelwe eqongeni.
Nje ukuba uvunyiwe, uya kuba usendleleni eya ekufumaneni idola ephezulu njengenkqubo yokufunda ngomatshini.
Ukuba uyinkampani ejonge ukwakha iqela lokufunda ngomatshini, iTotal yindawo elungileyo kuwe. Uya kuba nakho ukubetha ezinye zeengqondo eziqaqambileyo kwihlabathi xa kufikwa kubukrelekrele bokufakelwa kunye nokufunda ngomatshini.
3. Qulunqa iApp elula yeAI
Ukuphuhlisa usetyenziso kunokuba yenye indlela elungileyo yokwenza imali ngokufunda ngomatshini. Unokwenza iapps yobhaliso apho abasebenzisi banokuhlawula khona ukuvula ezinye zeempawu zepremiyamu.
Ii -appssssss eziqingqiweyo ziqikelela ukuba zenze ubuncinci i-50% ngaphezulu kwemali xa kuthelekiswa nezinye iiapps ezineentlobo ezahlukeneyo zokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Yenze ifikeleleke ngee-smartphones ukuze ibe yinxalenye ebaluleke kakhulu kubomi bemihla ngemihla kwaye iguqule abantu abaninzi.
Iindaba ezimnandi zezokuba ungakha, ulinganise, kwaye uthengise ii -apps zemali ngokulula kule minyaka yanamhlanje. Sebenzisa indawo efana neFlippa ukudwelisa usetyenziso lwakho kwaye uza kufumana imali kwangoko.
Ukuba ufumana i-niche, unokuphinda inkqubo kwakhona kumzi mveliso owahlukileyo ukuze uqhubeke nokwenza imali yokuphucula usetyenziso.
4. Yiba yi-ML yoMxholo woMxholo weMfundo
Okwangoku, ababaninzi abantu abazi malunga nokufunda ngomatshini.
Kutheni ungabi ngutitshala oFunda ngomatshini kwaye uthengise izakhono zakho kwi-Intanethi?
I-node js iseva yeendaba
Unokwenza imali ngokufunda ngomatshini kwi-intanethi okwangoku ukuba ungena kwishishini lokufundisa abantu ngokufunda ngomatshini kunye nezibonelelo zabo kubo.
Sebenzisa amaqonga akwi-Intanethi anika amaqonga okufundisa, kubandakanya i-Udemy, i-Coursera yokuqalisa kunye nokuthengisa ikhosi yakho.
Olunye ukhetho olukhulu lokufunda kunye nokuthengisa ulwazi lwakho yiCodeAcademy.
Ukuba ufuna ukuhlala usexesheni ngezakhono zakho zokufaka iikhowudi, unokufumana isaphulelo seepesenti ezingama-50 kwisicwangciso sonyaka sokubhalisela.
Unokwenza izinto zekhosi ezikwi-intanethi, okanye ijelo le-YouTube lokufundisa abantu ngale teknoloji ibonakalayo yakutshanje.
golang uguqule umtya ukuba udade
5. Yenza kwaye upapashe iNcwadi yeML ekwi-Intanethi
Ungabhala incwadi ukunika ulwazi olwahlukileyo kumandla e-3D yokuprinta, iirobhothi, iArtificial Intelligence, i-biology eyenziweyo, iinethiwekhi kunye neenzwa.
Ukupapasha incwadi kwi-intanethi ngoku kunokwenzeka ngamaqonga awahlukeneyo anje ngohlobo lokupapashwa ngokuthe ngqo olunikezela ngenkonzo yokushicilela yasimahla.
Kutheni le nto ungenzi eli cala lakho kwi-intanethi linyukele kwaye ufumane imali encinci ngokuthengisa incwadi ukwenza ukuba amashishini kunye nabantu benze umahluko ngokufunda ngomatshini?
Ngaba uzimisele ngokwenza imali kwi-Intanethi?
Qalisa namhlanje ukufumana umthombo wakho ogqibeleleyo wokusebenza kunye nekhosi yam yasimahla yeentsuku ezintlanu ekwandiseni iNgeniso yakho kwi-Intanethi.
Uyakufumana amanyathelo afanelekileyo endikhe ndawenza ngaphezulu kwe- $ 10k / ngenyanga kwi-Intanethi ukuze wenze okufanayo.
BEKA ITHEMBA LAKHO KUM!
Asiyi kukuthumela ugaxekile. Zikhusele ngalo naliphi na ixesha.
6. Thengisa izixhobo zeArtificial Intelligence
Ukuthengisa izixhobo zeGPS kubasebenzisi beemoto kunokuba yenye into enenzuzo enkulu ukuzama. Iinkonzo zokuhamba ngeGPS zinokunceda ukwenza uqikelelo lwendlela. Ke ngoko, inokunceda abasebenzisi bezithuthi ukunciphisa iindleko ukuba basebenzisa enye indlela ukuhamba.
Ngokufikeleleka kwimeko yangoku yezithuthi, unokuqikelela iindawo ezinokubakho ukuxinana ngokusekwe kumava emihla ngemihla.
Iinkampani ezininzi ngoku zisebenzisa i-CCTV ukunqanda ulwaphulo-mthetho emsebenzini.
Ungalisebenzisa eli bango likhulayo kwaye ubathengisele izixhobo zokujonga ividiyo.
Ezi zixhobo zenziwe ngohlobo lokuba zibone indlela yokuziphatha engaqhelekanga kwaye zinokukwazisa nolwaphulo-mthetho ngaphambi kokuba lwenzeke.
7.Kuveliswa kweNgcaciso yeDatha yeArtificial Intelligence ngeMali
Kuba ukufunda ngomatshini kunokunceda ekuvelisweni kweedatha ezinkulu, unokuxhamla ngokunikezela ngezisombululo ze-AI kwiinkampani ezahlukeneyo.
Iinkqubo ze-AI zisebenza ngokufanayo ebantwini kwaye zinamava amaninzi ahambelana nesandi kunye nokubonakalayo. Inkqubo ye-AI inokufunda izinto ezahlukeneyo kwaye inokukhuthazwa ngedatha enamandla kunye neevidiyo.
Iziseko zophando ezifundisayo zinokuhlawula imali eninzi kulwazi oluninzi.
Konke okufuneka unomdla kuko ngumcimbi wokhuseleko, imfihlo, ukuthembeka, ubulungisa, ukuphendula, ukungafihli nto, kunye nokuchaneka kwedatha.
Ukuba unganikezela ngaloo nto, uya kuphumelela kweli shishini. Le datha inokunceda amashishini enze izigqibo ezingcono.
8. Yenza iMveliso okanye iNkonzo
Enye indlela yokwenza imali nge-ML kukubonelela ngeenkonzo kunye neemveliso ezikwi-Intanethi. Unokwakha i-chatbot ye-AI ngokuqesha ifayile ye- Inkampani yophuhliso lwengxoxo ye-AI kwaye wenze imali ngayo.
Iimveliso ezinje ngeSiri, i-Alexa, iKhaya likaGoogle, iBitsy, kunye nezinye zenza kakuhle namhlanje.
Kutheni ungazami ukwenza into efanayo?
Iincoko ze-AI ziimigodi yegolide kunye nendlela egqibeleleyo yokwenza imali ngokufunda ngomatshini. Ukuphuhlisa izikhokelo ze-chatbot zee-smartphones kwi-backend kunye neinjini zokufunda ngomatshini kwindawo engaphambili yeyona ndlela ilungileyo yokwenza imali ngokukhawuleza.
Ukwenza iinkonzo ezinje ngohlalutyo lweemvakalelo, okanye umbono kaGoogle apho inkampani okanye umsebenzisi anokuhlawula emva kokuba enze izicelo ezininzi ngenyanga yenye indlela efanelekileyo yokufumana iML.
9. Thatha inxaxheba kwimingeni ye-ML
Ngaphandle kokufumana i-ML ngokufundisa, unokwenza imali ngokufunda ngomatshini ukuba uthatha inxaxheba kwaye uphumelele kukhuphiswano lwe-ML.
Ukuba uyigorha okanye uqokelele ubuncwane bolwazi kwesi sihloko, unokuzicel 'umngeni ngokuchasene nezinye iingcali zokufunda ngomatshini zehlabathi kukhuphiswano.
Unokujoyina ukhuphiswano lwe-ML njengeKaggle, Innocentive, Tunedit, kunye Umngeni.gov kwaye wenze imali ngokukhawuleza ukuba uphumelele.
10.Yila kunye nelayisensi iTekhnoloji yokuFunda ngomatshini
Ukuba unokwenza i-AI tech kwaye uyenze ilayisensi, emva koko unokwenza imali ngokuthengisa amalungelo akho komnye umntu.
Kuya kufuneka utyikitye ikhontrakthi njengomnini-layisenisi ukuvumela elinye iqela, elingumnini welayisenisi, ukulisebenzisa, ukulisebenzisa kwakhona, ukuliguqula okanye ukuphinda ulithengise ngemali, imbuyekezo, okanye ukuthathelwa ingqalelo.
11. Nika idatha kubadlali bangaphandle beShishini ngemali
Ukuthengisa idatha kwabanye abadlali ngaphandle kombutho wakho okanye ishishini kunokuba yenye indlela enenzuzo yokwenza imali ngokufunda ngomatshini.
Ukuba ufumana abadlali abanomdla kumava afana nokuziphatha kwabathengi, imisebenzi yezemali, nangaphezulu, ungabathengisela idatha abayifunayo okanye uqalise amathuba ngokudibeneyo.
Iinkampani zifuna ulwazi ngezinto ezahlukeneyo ukuphucula amava abathengi kunye nokuba nokhuphiswano.
Ke ngoko unokuqokelela kwaye uhlalutye idatha eyahlukeneyo kwaye uyinike imibutho ngentlawulo. Unganikezela ngale njengegig okanye umsebenzi ozimeleyo.
Nantsi indlela yokuphumelela kuqoqosho lwegig ukuhlalisa abathengi abaninzi.
Sikhankanyile iFlexJobs kunye neToptal, kodwa enye indlela ebalaseleyo apha kukujoyina iSolidGigs ukufumana imisebenzi kubukrelekrele bokufakelwa ngqo kwi-imeyile yakho yebhokisi.
12. Yenza iMali ngeeNkqubo zeMali kunye noHlahlo-lwabiwo mali
Unokufaka isicelo sokufunda ngomatshini kwimarike yemasheya kwaye wenze iingqekembe ezimbalwa. Ukufunda ngomatshini kunokunceda ekuthatheni isigqibo sokuba yeyiphi na into oza kuyithenga kwaye uza kuyithengisa okanye leliphi iqela eliza kuphumelela kumdlalo.
Ukuba unokuxela kwangaphambili ngokuchanekileyo kunye nesibonelelo esincinci sokuthandabuza, emva koko unokuthengisa iinkonzo zakho kwabanye abangcakazayo nakubathathi-nxaxheba kwimarike yesitokhwe.
Ezinye izixhobo zemali zinokuba nzima ukuphatha, kodwa ungazama kuqala ngokuthengisa iphepha.
Zininzi ii-API zokusebenzisa njengomthombo wedatha yakho.
Unokwenza imali elungileyo nge-HFT (ukurhweba rhoqo) kunye nezicelo zezezimali zokuFunda ngomatshini. Cinga ngokujonga ukubheja kwezemidlalo (imidlalo emibini yomdlali), umdyarho wehashe kunye nenja, kunye nemidlalo yamakhadi njenge-poker
13. Ukunyusa i-AI kuqaliso lweshishini
Ukuba uqala okanye ungumnini wokuqalisa kweshishini, emva koko unokujonga idatha yokuqokelela oyikhethileyo ukwenza ukhetho olunolwazi kunye nokunika ishishini lakho ithuba lokhuphiswano.
Xa uqokelela idatha kunye neemetrikhi ezinje ngeKissMetrics, uGoogle Analytics, nokunye, ungasebenzisa le datha ukuchaphazela umgca wakho ongezantsi.
Kananjalo inokukunceda ukuba ube ngumzekelo weempawu zabathengi abaguqukayo okanye abangazenziyo, abathengisayo okanye abathengisi abathengisayo, ixabiso lomthengi, kunye ne-ROI yezicwangciso zakho zokugcina abathengi.
Ungayibhala njani i-e x kwi-python
Ke ngoko, uya kwenza isigqibo unolwazi okanye wenze ubikezelo olungcono lwexa elizayo.
14. Fumana imisebenzi kunye nezifundo
Unokuhlawulwa ngokufunda ngomatshini ukuba ufumana imisebenzi kunye noqeqesho. Nangona uza kuqala ukwenza umsebenzi simahla, uya kufumana amava.
Ngale ndlela, emva koko unokusebenzisa ulwazi olufunyenweyo, ukukhangela umsebenzi ohlawula kakuhle.
Ngamava, kuya kuba lula ukufumana umsebenzi olungileyo okude oza kukunceda wenze imali ngokufunda ngomatshini. Ungayifaka le nto kwezinye izicelo zokuhlawulwa ngokufunda ngomatshini.
Okanye, ungasebenzisa i-AI ukwenza imisebenzi ethile yesiqhelo.
15.Yandisa ukuThengisa ngeShishini nge-AI kwiMithombo yeendaba yezeNtlalontle
Amaqonga eendaba ezentlalo ancede ekunyuseni amashishini kuwo onke amashishini. Amaqonga eendaba ezentlalo asebenzisa ukufunda komatshini ngenxa yabo kunye nezibonelelo zomsebenzisi.
I-AI inceda ulungiselele iindaba zakho zendaba kwaye wenze ngcono ukujolisa kwintengiso.
Ukufunda ngomatshini kuyawaqonda amava akho e-Facebook, uqaphele izinto onomdla kuzo, umsebenzi, uhlobo lwentengiso ekujoliswe kuyo onokunxibelelana nayo, kwaye unokucebisa ngezenzo ngokufanelekileyo.
Iqonga lePinterest lisebenzisa umbono wekhompyuter ukubona izinto okanye izikhonkwane ezikule mifanekiso kwaye zinokucebisa izikhonkwane ezifanayo ngokufanelekileyo.
Ngokufunda ngomatshini, eyona nto ibalulekileyo kumbono wekhompyuter, obu buchule bunceda ukukhupha ulwazi oluluncedo kwiividiyo nakwimifanekiso.
Inkcazo yokuFunda koMatshini
Ukufunda ngomatshini sisicelo sobukrelekrele (AI) esinceda iinkqubo zifunde ngokuzenzekelayo kwaye ziphucule amandla azo kumava ngaphandle kwenkqubo.
Ukugxininisa ekufundeni ngomatshini kukuphuhlisa iinkqubo zekhompyuter ezinokuthi zifikelele kwidatha kwaye ziyisebenzise ukufunda izinto ezahlukeneyo zodwa.
Ubukrelekrele bobugcisa, obuyintsimi yokufunda kumatshini, ichaza Ukusetyenziswa kwe-IOT kushishino lweemoto elinganisa imisebenzi yokuqonda yomntu enxulumana nezinye iingqondo zabantu kwizinto ezinje ngokusombulula iingxaki, kunye nokufunda.
Kwakhona, i-AI inokuba ngumgaqo ocwangcisiweyo kuphela olawula indlela oziphatha ngayo umatshini kwiimeko ezithile.
Xa uthetha ngeArtificial Intelligence, kuya kufuneka uthathele ingqalelo zombini ukufunda okunzulu kunye nokufunda ngomatshini. Ukufunda ngomatshini kubandakanya ii-algorithms ezahlukeneyo zeklasi kwimisebenzi eyahlukeneyo ebandakanya ukuhlengahlengisa, ukuhlanganisa okanye ukwahlulahlula.
Ukufunda okunzulu, kwelinye icala, kudibanisa iinethiwekhi ze-neural ezinokusombulula iklasi kunye nemisebenzi ephambili, kubandakanya ukuveliswa kolwimi kunye nokwamkelwa komfanekiso.
indlela yokuthenga kwi-tradeogre
ukuseta into edibeneyo ngokulandelelana.
Amaxwebhu kaGoogle api ongeze umqolo
Iakhawunti yam ye-avast ingena
Intetho yokushukuma ngokubhaliweyo
nvm tshintsha uhlobo lwendlela
zisebenza kwisiguquli selizwi esisebenzayo kwi-intanethi